Maalinta: Ogast 14, 2019
Shirkadda Bayburt Group Senbay Madencilik, oo ah mid ka mid ah shuraakada Madaarka Gayrettepe-Yeni Airport, oo bixin doonta garoomada Diyaaradaha Magaalada Istanbul kana soo baxda magaalada, ayaa ka baxday mashruucan. Qaybtii Senbay, Kolin, Cengiz iyo Kalyon ayaa qaatay. Marka dhismaha khadka ay ka bilaabato 2017 [More ...]
Tareenka, baska, iyo waxyaabaha la hilmaamay ee ku dhexyaala 'Intercity Bus Terminal', oo ay maamusho TransportationPark A.Ş., oo ah isbahaysi ka tirsan Dawlada Hoose ee Magaalada Kocaeli, ayaa sugaya milkiilayaashooda. Aqoonsiga la hilmaamay, laysanka darawalka, kaararka ardayda, baasaboor iyo boorsooyin lagu ilaaway taraam, bas ama boosteejo [More ...]
Madaxweynaha İBB Ekrem İmamoğlu wuxuu ku dhaqaaqay talaabo talaabo talaabo ah xaafada '5' Beerta Archaeological Park ee ka socota Aksaray Underground Bazaar, Xarunta Ilaalinta Amniga ee Yenikapi, Buundada Dahabiga ah ee 'Central Horn Metro Bridge' ilaa goob firaaqeed oo laga helay qodobo badan. [More ...]
Maanta oo Taariikh ah: 14 August 1911 ee Shirkadda Diyaaradaha Oriental
Taariikhda Maanta 14 Agoosto 1869 Porthole iyo Porte waxay sameysteen qaban-qaabooyin door ah shirkadda. 14 Agoosto Ilaalada khadka toosan ee Shirkadda 1911 Railways waxay loo oggolaaday inay wataan hubka. hub [More ...]